Kimochi là gì? Liệu bạn đã biết cách dùng kimochi trong tiếng Nhật đúng cách | Anybook.vn - Anybook
Kimochi là gì? Liệu bạn đã biết cách dùng kimochi trong tiếng Nhật đúng cách | Anybook.vn
Inona no dikan’ny kimochi? Miaraha aminay hianatra momba ny rakibolana japoney, fifandraisana japoney, fifandraisana japoney ary hahita fampahalalana mahasoa kokoa omenay ao amin’ny lahatsoratra etsy ambany!
Raha mpankafy sarimihetsika japoney ianao dia tsy maintsy efa nandre ny teny hoe kimochi. Inona àry no atao hoe kimochi amin’ny teny japoney? Inona no dikan’ny kimochi? Nahoana ny olona no tia mampiasa an’io fehezanteny io toy izany? Andao hianatra rakibolana japoney, fifandraisana japoney fototra, fifandraisana japoney miaraka amin’ny fampahalalana mahasoa!
1 I. Inona no atao hoe Kimochi?
2 II. Inona no dikan’ireo teny izay ampiarahina matetika amin’ny teny hoe Kimochi?
2.1 1. Inona no dikan’ny hoe Iku Kimochi?
2.2 2. Inona no dikan’ny teny hoe Warui Kimochi?
2.3 3. Inona no dikan’ny teny hoe yamete kimochi?
2.4 4. Inona no dikan’ny teny hoe Kimochi ii?
3 III. Amin’ny toe-javatra inona no ampiasana Kimochi?
3.1 1. Amin’ny fiainana andavanandro
3.2 2. Ampiasao rehefa tena tia zavatra
3.3 3. Ampiasaina amin’ny sarimihetsika japoney
4 IV. Nahoana no diso fandray matetika ny teny hoe Kimochi?
5 V. Ny antony itiavan’ny tanora ny teny hoe Kimochi
6 SATRIA. Misy zavatra tokony hotadidinao rehefa mampiasa Kimochi
6.1 1. Fantaro tsara foana ny heviny
6.2 2. Aza atao vazivazy ny kimochi
6.3 3. Ampiasao foana ny toe-javatra mety sy ny raharaha
7 VII. Ny zava-manitra sasany amin’ny teny japoney tokony ho fantatrao
8 VIII. Eo am-pamaranana
I. Inona no atao hoe Kimochi?
Inona no atao hoe Kimochi? Inona no dikan’ny kimochi? Kimochi dia teny avy amin’ny firenena kanto ao Japana. Ny kimochi dia azo antsoina hoe fihetseham-po na fihetseham-po. Satria io dia teny ampiasaina hilazana ny toe-tsaina na ny fihetseham-pon’ny olona iray aorian’ny tranga iray na mety ho fihetsika, dia nisy zavatra nitranga vao haingana, rakibolana japoney, fifandraisana japoney fototra, fifandraisana japoney.
Inona no dikan’ny kimochi?
Inona no dikan’ny kimochi? dia teny misongadina kokoa amin’ny fanehoana fihetseham-po. Rehefa ampiarahina amin’ny teny hafa i Kimochi dia hamorona sosona hevitra samihafa. Na izany aza, Rehefa irery izy io, dia mampiseho ny fitabataban’ny mpandahateny na ny fihetseham-pony. Mba hahamora kokoa ny fifandraisana dia azonao atao ny mahatakatra fa ny Kimochi amin’ny teny Japoney dia mifanakaiky amin’ny dikan’ny teny hoe “Feeling” amin’ny teny anglisy. Midika izany fa azo takarina fa ny votoatin’io teny Kimochi io dia ny tsy misy dikany saropady na maloto. Fa raha mampiasa azy io amin’ny toe-javatra sasany isika, dia afaka mahazo ny teny ihany koa ny manana heviny saro-pady kokoa. Noho izany, indraindray ny tanora ankehitriny dia mbola mampiasa io teny io mba hifanesoana.
Inona no atao hoe Kimochi? dia teny izay matetika ampiasaina amin’ny toe-javatra eo amin’ny fiainana. Saingy raha ny marina, ny Japoney dia mampiasa io teny io isan’andro ary amin’ny toe-javatra maro izay mety ho tonga ao amin’ny fianakaviana na namana, sekoly ary indrindra eo amin’ny fifandraisan’ny mpivady. Azonao atao ny mampiasa ny teny Izany dia ampiasaina hilazana fahatsapana fifaliana na fahafinaretana, fahafaham-po, fampiononana, na faharatsiana mihitsy aza eo amin’ny fiainany. Saingy tadidio fa ny zava-dehibe iray dia ny fampiasana azy io araka ny tokony ho izy amin’ny toe-javatra tsirairay raha tsy izany dia ho mora ny ho diso hevitra.
Jereo koa: Inona no atao hoe mpiofana – inona no tokony ho fantatrao raha te ho mpiofana Japoney ianao
II. Inona no dikan’ireo teny izay ampiarahina matetika amin’ny teny hoe Kimochi?
1. Inona no dikan’ny hoe Iku Kimochi?
Ny Iku Kimochi dia matetika novakian’ny Vietnamiana hoe “i cu Kimochi” na “i cu kimochi”. Ity dia teny mitambatra hafa ao izay manana dikany tena mahaliana avy amin’ny Kimochi.
READ Những Câu Chuyện Cổ Tích Hay Về Tấm Lòng Nhân Hậu | Anybook.vn
Ny Iku Kimochi dia matetika ampiasaina amin’ny tontolon’ny fiainana “izany”. Iku Kimochi dia fantatra koa amin’ny teny ampiasaina hanehoana fahafaham-po. Amin’ireo tranga ireo dia fahafaham-po amin’ny firaisana ara-nofo raha toa ka “climax” ny mpivady. Noho izany, zara raha mahita an’io fehezanteny io ianao eo amin’ny fiainana andavanandron’ny Japoney. Na handeha hipetraka na hiasa any Japon ianao, dia ho kely ny fahafahanao mihaino satria satria izy ireo ihany no mifampiresaka rehefa izy roa ihany no ao anatin’ny tontolo manokana. Raha mandeha eny an-dalambe ianao ary tampoka dia mandre lehilahy iray milaza aminao hoe ihu iku kimochi, dia misy ny mety ho tojo olona maditra ianao, mandehana haingana any amin’ny toerana be olona mba hahazoana antoka ny fiarovana anao.
2. Inona no dikan’ny teny hoe Warui Kimochi?
Mifanohitra amin’ny teny Iku Kimochi, ny teny Warui kimochi dia manana heviny hafa, ratsy kokoa. Azonao atao koa ny mahita io teny io betsaka amin’ny fiainana andavanandron’ny Japoney. Amin’ity andian-teny ity, ny teny hoe Kimochi dia tsy misy afa-tsy “fahatsapana”. Ohatra, malahelo aho na malahelo no tena dikan’ny teny hoe Kimochi Warui. Na ny teny hoe Warui aza dia manana fihetseham-po ratsy, ratsy ary ratsy.
Raha tia an’i Japana ianao ary te hianatra Japoney, rakibolana japoney, fifandraisana Japoney fototra, Japoney, dia azo antoka fa fantatrao fa avo dia avo ny tahan’ny famonoan-tena ao Japana. Ny mpianatra eto dia terena hianatra ary vesaran’ny zavatra andrasan’ny fianakaviana sy ny sekoly, raha ny olon-dehibe teren’ny fiainana na ny vola, ny vehivavy koa dia miatrika fanerena eo amin’ny fiainana.fianakaviana, sns. Matetika ny Japoney no mampiasa ny teny hoe Kimochi Warui mba hanehoana ny azy fihetseham-po ratsy.
Raha misy olona milaza izany aminao dia midika izany fa ao anatin’ny toe-tsaina tena ratsy izy, malahelo be ary tsy misy lalana hivoahana. Raha azo atao dia omeo teny fampaherezana na zarao izy ireo.
Ankoatra izany, io teny io dia ampiasaina amin’ny tranga izay azo lazaina ho fanehoana tsy fahafaham-po amin’ny zavatra iray. Ohatra, raha mitabataba sy mafy loha ny kilasy, dia afaka miteny an’i Kimochi Warui koa ny mpampianatra mba hanehoana ny fahasosorany sy ny fahadisoam-panantenany momba ny kilasy. Na angamba raha nibedy anao ny lehibenao na niteny ratsy nataon’ny mpiara-miasa aminao, dia azonao ampiasaina io fehezanteny io.
Araka ny hitanao, tsy ny fehezanteny rehetra misy ny teny hoe Kimochi ao anatiny dia ho ratsy, sa tsy izany? Noho izany, rehefa mampiasa an’io fehezanteny io amin’ny Japoney ianao, dia tokony handinika manokana ny teny manodidina mba tsy hahatonga ny hafa ho diso hevitra na tsy mahazo aina. Inona no atao hoe Kimochi? Hanampy olona maro indray ve izany? Azonareo ve izao ny atao hoe Warui Kimochi?
3. Inona no dikan’ny teny hoe yamete kimochi?
Amin’ny teny japoney dia matoanteny io, fa rehefa ampiarahina amin’ny teny hoe Kimochi io teny io dia misy dikany saro-pady sy maizina.
READ [Review] The Magic (Phép màu) – Rhonda Byrne | Anybook.vn
Amin’ny ankapobeny: Yamete dia manana dikany 2 abo ao anatin’izany:
やめて (yamete) dia midika hoe mijanona (verb)
やめて (yamete) midika hoe Aza (verbo)
Inona no dikan’ny kimochi yamete?
Araka ny hitanao, raha mijoro irery io teny io dia tsy hisy dikany manokana hisarihana ny saina. Na izany aza, raha milaza ny teny hoe Yamete Kimochi ianao, dia ho hafa tanteraka ny dikan’ny teny. Raha mijoro irery izy dia midika hoe mijanona na mijanona tsy manao intsony. Fa rehefa mijoro amin’ny teny hoe Kimochi dia midika hoe mandehana na aza mijanona.
Eo amin’ny fiainana dia matetika isika no mahita an’io teny io amin’ny sarimihetsika Japoney olon-dehibe. Raha miala voly ianao ary miteny Yamete Kimochi ilay mahery fo, fantatrao izay tian’izy ireo holazaina, sa tsy izany? Indray mandeha indray rehefa mila mandinika ny tontolon’ny fehezanteny isika mba hahatakarana bebe kokoa ny dikan’ny teny hoe Kimochi, okay?
4. Inona no dikan’ny teny hoe Kimochi ii?
Ankoatra ireo andian-teny etsy ambony, dia matetika ampiasaina koa ny teny hoe Kimochi ii. Inona ary ilay ii ampiana aorian’ny teny hoe Kimochi?
Ny dikan’ny hoe “ii” dia “tsara”, ka raha ampiarahina amin’ny teny Kimochi dia midika hoe “tsara”. Raha midika hoe mahatsiaro ho tsara, dia matetika ampiasaina ny Kimochi ii. Na inona na inona dikany, io teny Kimochi ii io dia hitondra dikany tsara ho an’ny mpandahateny sy mpihaino.
Jereo koa: Ahoana ny fitadiavana vatsim-pianarana ho an’ny mpitsabo mpanampy hianatra any Japon?
III. Amin’ny toe-javatra inona no ampiasana Kimochi?
1. Amin’ny fiainana andavanandro
Inona no atao hoe Kimochi? Inona no dikan’ny kimochi? Raha mpianatra iraisam-pirenena mianatra Japoney mipetraka any Japon na mpiasa vahiny ianao dia ho hitanao mora foana io teny io. dia ampiasaina ho teny fampitam-baovao isan’andro amin’ny Japoney.
Ho an’ireo izay tsy mahazo tanteraka ny dikan’ny dia ho toy ny fanangonan-tsonia ilay teny ary misy heviny mihantsy na maizina. Na izany aza, miaraka amin’ny Japoney izy ireo dia mampiasa ny teny Tena fahita eo amin’ny fiainana andavanandro izany. Tsy ho maizina raha azonao ny dikan’ny hoe sa tsy izany?
2. Ampiasao rehefa tena tia zavatra
Rehefa mahatsiaro tena ho liana sy faly ianao rehefa omena fanomezana avy amin’olona, ​​dia azonao atao ny miteny hoe “Kimochi”. Ankoatra izany, Antsoina hoe teny maneho fitiavana ny olona iray koa izy io.
3. Ampiasaina amin’ny sarimihetsika japoney
Tena malaza amin’ny sarimihetsika toy ny anime, manga, na sarimihetsika ho an’ny olon-dehibe i Japana. Ity teny ity dia ho tena mora hita amin’ity sehatra fialamboly ity.
Vakio ihany koa: Inona no atao hoe mpitsabo mpanampy? Famaritana ny asa ho an’ny fianarana mpitsabo mpanampy any Japon
IV. Nahoana no diso fandray matetika ny teny hoe Kimochi?
Inona no atao hoe Kimochi? Inona no dikan’ny kimochi? Ho an’ireo dikany etsy ambony dia hitanao fa ny teny hoe Kimochi dia teny manana dikany tena madio ary ampiasaina hanehoana fihetseham-po amin’ny fomba mahazatra. Nahoana anefa ny lehilahy no mahalala ny teny? midika hoe “maizina” izany?
READ Không có gì mãi mãi – Cuộc đời có tồn tại hai tiếng “mãi mãi” | Anybook.vn
Azo hazavaina izany satria ny teny hoe Kimochi dia matetika ampiasaina amin’ny sarimihetsika an’ny indostrian’ny sarimihetsika japoney ho an’ny olon-dehibe, satria io no sampana “mpanjifa” lehibe indrindra, ka azo takarina tanteraka ireo Lehilahy izay mahafantatra betsaka avy amin’i Kimochi. Noho izany, ny tady ihany koa no mahatonga ny olona maro tsy mahazo ny hevitry ny teny hoe Kimochi.
Ho an’ny lohatenin’ny olon-dehibe, io teny io dia mbola hampiasaina hanehoana ny fihetseham-po na ny fientanentanana mandritra ny fanaovana ny sarimihetsika mba hampitomboana ny fisarika ny mpijery. Na izany aza, noho ireo eritreritra diso ireo, dia maro ny olona no diso hevitra fa rehefa mahita resadresaka misy ny teny hoe Kimochi mivoaka avy eo izy ireo, dia hiteraka tsy fifankahazoana tsy ilaina izany.
Sarimihetsika japoney 18+ no efa nisy hatry ny ela, ary ireo sarimihetsika ireo dia nafarana tany Vietnam nanomboka tamin’ny taona 2000. Miaraka amin’ny sarin’ireo mpilalao sarimihetsika japoney manana endrika mazava sy feno fanantenana. Rehefa mihira ny teny hoe Kimochi izy ireo dia hiteraka fientanentanana ho an’ny lehilahy rehefa mijery sarimihetsika.
Fanampin’izany, ny fampiasana matetika ny teny hoe Kimochi dia mety ho fikasan’ny tale ihany koa satria mety hahatonga ny mpijery hahatakatra ny fihetseham-pon’ny sarimihetsika tsy misy sakana amin’ny fiteny. Satria, ny teny hoe Kimochi dia onomatopoeia izay hitondra fihetseham-po sy fiantraikany ara-pihetseham-po maro.
Amin’izao fotoana izao, ny teny hoe Kimochi dia toa “zava-manitra” tena ilaina amin’ny sarimihetsika ho an’ny olon-dehibe, ka tsy azo soloina amin’ny teny hafa.
V. Ny antony itiavan’ny tanora ny teny hoe Kimochi
Inona no dikan’ny kimochi? Inona no antony mbola tsy azon’ny olona tsara ny teny japoney Kimochi? fa ampifandraiso haingana amin’ny votoaty heverina fa tsy dia tsara. Indrindra fa ho an’ny tanora amin’izao fotoana izao dia tiany ny mampiasa ireo andian-teny misy dikany diso momba ny votoatiny.
Hitantsika mazava tsara fa nampidirina sy nampiasaina betsaka tany Vietnam io teny io noho ny fitaomana mahery vaika avy amin’ny indostrian’ny sarimihetsika lehibe ao Japana. Satria ao amin’ireo sarimihetsika ireo dia misy mpilalao milalao ao amin’ny sarimihetsika izay matetika miteny hoe: “… kimochi…” Maro ny tanora no nandray izany ho fahafinaretana ny maka tahaka sy manaratsy ny hafa. Tsy izany ihany anefa ny dikan’ny teny hoe Kimochi, fa azontsika atao koa ny milaza na mampiasa io teny io miaraka amin’ny dikany maro hafa.
SATRIA. Misy zavatra tokony hotadidinao rehefa mampiasa Kimochi
1. Fantaro tsara foana ny heviny
Mianara teny japoney ny teny japoney, sahala amin’ny teny vietnamiana, ny teny japoney koa dia tena isan-karazany sy manankarena. Noho izany, raha mbola tsy takatsika tsara na tsy azontsika tsara ny dikan’ireo fiteny hoe “tanin’ny vonin’ny serizy” ireo, indrindra fa ireo teny manana heviny maro toa an’io teny io, dia hisy vokany mahatsiravina izany.
2. Aza atao vazivazy ny kimochi
Betsaka ny olona nampiasa an’io teny io ho amin’ny tanjona tsy mety na nampiasa azy io mba hanesoana ny hafa. Ny ohatra mahazatra dia ny fampiasana azy io hanesoana ireo vehivavy sakaizan’ny namana lahy. Ary azafady atsaharo ny fampiasana an’ity fehezanteny ity ho vazivazy mba hampiala voly ny tenanao raha mbola tsy mahay Japoney ianao!
3. Ampiasao foana ny toe-javatra mety sy ny raharaha
Raha ampiarahina amin’ny teny hafa io teny io dia samy hafa ny heviny. Noho izany, mianatra teny Japoney, rakibolana Japoney, Japoney fototra, fifandraisana Japoney mba hisorohana ny tantaranao ho latsaka ao anatin’ny toe-javatra mahatsikaiky, mila manavaka izay toe-javatra ianao.
VII. Ny zava-manitra sasany amin’ny teny japoney tokony ho fantatrao
Miaraka amin’io teny io dia misy teny sonika maromaro hafa tokony ho fantatrao ao anatin’izany: Dame izay midika hoe: Tsia!; Tsia, Yamete dia midika hoe: Atsaharo; Ajanony, Hayaku midika hoe: Haingana; Haingana,…
VIII. Eo am-pamaranana
Manantena aho fa ny fampahalalana mahasoa avy amin’ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hamaly ny fanontanianao, ary hanala ny tsy fifankahazoana tsy ilaina momba ny teny hoe “Kimochi”. Noho izany, aoka ianao ho olom-banona rehefa mampiasa rakibolana japoney, japoney fototra, mifandray amin’ny teny japoney amin’ny fampiasana an’io teny io amin’ny toe-javatra mety!
Previous: Hiệu Quả Công Việc Là Gì? Cách Đánh Giá, Triển Khai Công Việc Hiệu Quả | Anybook.vn
Next: Lắng đọng trước những bài thơ về cuộc sống xa nhà cảm động | Anybook.vn